गण्डकी विश्वविद्यालय रजिस्ट्रारमा डा. कैलाश तिमिल्सिना नियुक्त | eAdarsha.com
पोखरा । गण्डकी विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रारमा डा. कैलाश तिमिल्सिना नियुक्त भएका छन् । अमेरिकाको मियामी विश्वविद्यालबाट जनसंख्या विषयमा पिएचडी गरेका उनलाई कुलपति डा.गणेशमान गुरुङले रजिस्ट्रारमा नियुक्त गरेका हुन् ।
यो पदमा लागि खुला प्रतिस्पर्धाका लागि आह्वान गरिएकोमा ९ जनाले विस्तृत कार्ययोजना बुझाएका थिए । तीमध्ये उत्कृष्टताका आधारमा तिमिल्सिना छनोटमा परेका हुन् ।
पर्वतको मोदी गाउँपालिका २ देउपुरका स्थायी बासिन्दा तिमिल्सिना थाइल्यान्डबाट स्नातकोत्तर गरेका उनले जापानबाट पोस्ट ग्राजुएट गरेका छन् । उनी ५ वर्षका लागि नियुक्त भएक हुन् ।
तिमिल्सिना काठमाडौंको स्कुल अफ एन्भाइरोमेन्ट साइन्स एन्ड म्यानेजमेन्टका एकेडेमिक डाइरेक्टर हुन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आफैले विश्वविद्यालय थाल्ने गरी पोहोर नै ऐन ल्याएको हो । मेडिकल कलेज सञ्चालनसहित प्राविधिक शिक्षामा फोकस गर्ने गरी विश्वविद्यालयले प्रारम्भिक काम थालिसकेको छ । कुलपति, उपकुलपति र न्यासिक परिषद सदस्य र अध्यक्ष यसअघि नै नियुक्ति भइसकेको छ ।